စပိန်တွင် လင်းပိုင်များနှင့် ရေကူးရန်နေရာ | ခရီးသွားသတင်း
စပိန်မှာ လင်းပိုင်တွေနဲ့ ရေကူးလို့ရမယ့်နေရာ
Mariela Carril | | အကြံပေးချက်များ, Espana
အ လင်းပိုင် သူတို့က လှပပြီး အလွန်စမတ်ကျတယ်။ ၎င်းတို့သည် အဏ္ဏဝါနို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ cetaceans နှင့် မျိုးစိတ် ၃၄ မျိုးရှိသည်။. မင်းသိလား? ငါသူတို့ကိုချစ်တယ်၊ဒါပေမယ့်သူတို့ကတိရိစ္ဆာန်တွေဖြစ်ပြီးမင်းသူတို့ကိုတစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ရမယ်လို့ငါယူဆတယ်၊ ဒါကြောင့်လူတွေကသူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခရီးသွားဆန္ဒကိုငါတကယ်နားမလည်ဘူး...
ဒါပေမယ့် မေးစရာရှိတာက၊ စပိန်မှာ လင်းပိုင်တွေနဲ့ ရေကူးနိုင်လား။? အခြေခံသဘောအရ, အဘယ်သူမျှမ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေက အာမခံထားပေမယ့် အခုထိပါပဲ။ သူတို့ကို တနည်းနည်းနဲ့ အနီးကပ်မြင်နိုင်တဲ့ နေရာတချို့ရှိတယ်။ ဘာသာရပ်အကြောင်း နည်းနည်းလောက် သိပါရစေ။
စပိန်တွင် လင်းပိုင်များနှင့် ရေကူးပါ။
ငါတို့ပြောသလိုပဲ စပိန်မှာ လင်းပိုင်တွေနဲ့ ရေကူးရတာ တော်တော်ခက်တယ်။ တားမြစ်သည်. ဒါတောင် ဟုတ်တဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ လင်းပိုင်ပွဲတွေရှိတယ်။ နီးနေလျှင်ပင်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ Madrid Zoo သို့မဟုတ် Barcelona Zoo
သူတို့နဲ့ ပိုဆက်ဆံဖို့ သင်သွားရမယ်။ Benidorm၊ Mundomar သို့. ဒီမှာရှိတယ်။ ဥရောပရှိ အကောင်းဆုံး dolphinariums များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။လင်းပိုင်များသာမကဘဲ၊ အခြားရေနေသတ္တဝါများ လိပ်၊ ပင်လယ်ခြင်္သေ့၊ ဖျံ၊ ဖလူမင်းဂို အစရှိတဲ့ မျိုးစိတ်ပေါင်း 80 ရှိပြီး လေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လင်းပိုင်ကုထုံး။
မွန်ဒိုမာတွင် အဘယ်အရာ ကမ်းလှမ်းသနည်း။ နာရီဝက်အစည်းအဝေးများ လင်းပိုင်များနှင့်အတူ၊ စောင့်ရှောက်သူများ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ပေးသူများနှင့်အတူ ဤအံ့သြဖွယ်တိရစ္ဆာန်များ၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးသွင်ပြင်များကို အများသူငှာ သင်ကြားပေးသော စောင့်ရှောက်သူများ သို့မဟုတ် လေ့ကျင့်ပေးသူများ အမြဲရှိနေပါသည်။ ကလေးတွေနဲ့ သွားရတာ အရမ်းကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပါ။. အဲဒီအခိုက်အတန့်ဟာ မိနစ် 30 ကြာမြင့်ပြီး တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှု၊ အဆက်အသွယ်ကို ထာဝရအမှတ်ရစေမယ့် ဓာတ်ပုံနှစ်ပုံ၊ လက်ဆောင်ပဝါတစ်ထည်၊ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့ ဓာတ်သတ္တုရေပုလင်းငယ်တစ်ခုတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီမှာ ကြိုတင်မှာထားရန် အကြံပြုလိုပါသည်။အွန်လိုင်းစတိုးမှတဆင့် သို့မဟုတ် အမည်၊ မျိုးရိုးအမည်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ ကလေးများနှင့် လူကြီးအရေအတွက်နှင့် စိတ်ဝင်စားသည့်အချိန် (ညနေ 12 နာရီ သို့မဟုတ် 16 နာရီတွင်ဖြစ်နိုင်သည်) ကိုဖော်ပြသော mundomar@mundomar.es သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်၊ .
ဖုန်းဖြင့်လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်၊ အချက်အလက်အားလုံးသည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ရှိနေသည်။ ဘာလဲ ဟုတ်လား။ ရေကူးနည်းကို သိထားဖို့ လိုပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှု မရှိအောင် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ပါနဲ့။ အကယ်၍ သင်သည် ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင်သည် အသက်5နှစ်မှ 12 နှစ်ကြားတွင် ရေကူးမတတ်ပါက၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် အတူလိုက်ပါပါ။ ဒီလှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစား မတ်လမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း နေ့စဉ်ကျင်းပသည်။စျေးနှုန်းသည် လူကြီးတစ်ဦးလျှင် ယူရို 80 နှင့် ကလေးတစ်ဦးလျှင် 55 ယူရိုဖြစ်သည်။
စပိန်တွင် လင်းပိုင်များတွေ့ဆုံရန် အခြားနေရာတစ်ခုမှာ Catalonia နှင့် Aquopolis ဖြစ်သည်။ ဤနေရာသည် Salou အနီးရှိ La Pineda ရှိ Costa Dorada တွင်ရှိပြီး လှပသည်။ ရေဥယျာဉ်. သင့်တွင် လင်းပိုင်များနှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ ဧည့်လမ်းညွှန်၊ ပညာပေးဟောပြောပွဲ စောင့်ရှောက်သူများ၏ မျက်လုံးအောက်တွင် အမြဲတစေ တိရိစ္ဆာန်များကို ထိတွေ့ခွင့်ရစေမည့် သေးငယ်သော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှု။
သေချာတာကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်။ ဒီနေ့ဈေးက လူကြီးတစ်ဦးနှင့် ကလေးတစ်ဦးလျှင် ယူရို 74။ ကလေးများသည် အနည်းဆုံး အသက် ခုနစ်နှစ်နှင့် အနည်းဆုံး အရပ် 1, 15 မီတာ ရှိရမည်။ အသက်7နှစ်မှ 10 နှစ်ကြားရှိသူများသည် အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်မည့် လူကြီးတစ်ဦးနှင့်အတူ လိုက်ပါရမည်ဖြစ်သည်။
ထဲမှာ Valencian အသိုင်းအဝိုင်း လင်းပိုင်တွေနဲ့လည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်မှာလဲ? မှာ ဗလင်စီယာ၏ Oceanogràfic Animalia Passport နှင့်အတူ ဆုံနိုင်ရုံသာမက လင်းပိုင် ဒါပေမယ့်လည်း ပင်လယ်ခြင်္သေ့ နှင့် ဤထူးဆန်းသောတိရစ္ဆာန်များ၏ဘဝအကြောင်းအားလုံးကို လေ့လာပါ။ ပြီးတော့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အခကြေးငွေက ဘယ်လောက်လဲ။ လူကြီးတစ်ဦးလျှင် €44,70 နှင့် ကလေးတစ်ဦးလျှင် €37။
Valencia ၏လင်းပိုင်များကိုကြည့်ရှုရန်၊ ကလေးများသည်အနည်းဆုံးအသက်ခြောက်နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည်ခြောက်နှစ်မှတစ်ဆယ့်နှစ်နှစ်ကြားရှိပါကလူကြီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိုက်ပါရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးသူတွေရဲ့ အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားရင် တစ်နေ့တာ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဟုတ်တယ်၊ သင်သည် တစ်ရက်တာ Trainer လုပ်နိုင်ပြီး တိရစ္ဆာန်များကို မည်ကဲ့သို့ ဂရုစိုက်ကြောင်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။ အပိုဆောင်း- ငါးမန်းတွေနဲ့ အိပ်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ယူရို 90 နဲ့တောင် ကမ်းလှမ်းထားတယ်။
El Delfinarium Selwo Marina သည် Malaga တွင်တည်ရှိသည်။Benalmádena မြူနီစီပယ်တွင်၊ ဤနေရာတွင် လင်းပိုင်သည် ရေအောက်လူသွားလမ်းတစ်ခုရှိပြီး တိရိစ္ဆာန်များကို အနည်းငယ်ပို၍နီးကပ်စွာတန်ဖိုးထားနိုင်စေရန်၊ ဂိမ်းများကို စီစဉ်ပေးထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကာ လင်းပိုင်များကို ထိနိုင်သည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုများ ပြီးသောအခါ၊ ကလေးတစ်ဦးလျှင် 39 ယူရိုဖြစ်ပြီး လူကြီးတစ်ဦးလျှင် သင်သွားသည့်ရာသီပေါ်မူတည်၍ 74 ယူရိုဖြစ်သည်။
Malaga တွင်ဤအတွေ့အကြုံကိုခံစားရန်ကလေးများအတွက်အနည်းဆုံးအသက်သည်5နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည်5နှစ်မှ7နှစ်ကြားရှိလျှင်၎င်းတို့သည်လူကြီးတစ်ဦး၏လက်ထဲတွင်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အမြင့် 1,25 မီတာထက်မနည်း တိုင်းတာနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့ဘေးနားရှိ လူကြီးတစ်ဦးနှင့်လည်း တိုင်းတာနိုင်သည်။
ဤနေရာများသည် စပိန်ရှိ လင်းပိုင်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သော နေရာများဖြစ်သည်။ အစမှာပြောခဲ့သလို ရေကူးတာကို နိုင်ငံတွင်းမှာ တားမြစ်ထားလို့ ရေကူးတာကို သတိပြုပါ။ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ ရင်းနှီးခြင်း၊ ထိတွေ့ခြင်း နှင့် အခြားအရာများ မဟုတ်ပါ။.
စပိန်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာ နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေပေမယ့် သင်နည်းနည်းပိုလုပ်နိုင်တယ်။ ပေါ်တူဂီ၊ Zoomarine တွင်။ ဒီမှာ ဟုတ်တယ် မင်းရေကူးလို့ရတယ်။ အပင်တွေနဲ့ သဲဖြူဖြူတွေ ဝန်းရံထားတဲ့ ဧရာမ ရေကန်ကြီးထဲကို ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ပိုမိုစျေးကြီးသော်လည်း၎င်းသည်ထိုက်တန်သည်- ၎င်းသည်ရာသီပေါ် မူတည်၍ ယူရို 125 ကုန်ကျသည်။
ဒါပေမယ့် စပိန်မှာ တခြားနေရာမရှိဘူးလား။ ကောင်းပြီ၊ သင်သည် အတ္တလန္တိတ်ကမ်းရိုးတန်းသို့ သွားနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ သဘာဝနေရင်းဒေသတွင် ၎င်းတို့ကို သွားတွေ့နိုင်စေမည့် ခရီးစဉ်အတွက် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ဟုတ်ပါတယ်။ အပျော်ခရီးတွေ ဒီလိုအမျိုးအစားတွေရှိတယ်။ Canary ကျွန်းများတွင်ဥပမာ၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရေကူးတာက တရားမဝင်သေးဘူး။
အမှန်တရားကတော့ မင်းလင်းပိုင်တွေနဲ့ ရေမကူးနိုင်တာ ငါ့အတွက် ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထိန်းထားရတာက ၁၉ ရာစုရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ထိတ်လန့်စရာလို့ ထင်တယ် မဟုတ်လား ။ ခရီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တီဗီမှာဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်မှာကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဘာတွေလိုအပ်နေလဲ။ ဟုတ်တယ်၊ လင်းပိုင်တွေနဲ့ ရေကူးတာက အံ့သြစရာကောင်းပြီး တကယ့်ကို မေ့မရနိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံဖြစ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီတိရစ္ဆာန်တွေကို အလေးပေး၊ ခရီးသွားတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ လှေတွေမှာ နှောင့်ယှက်တာ ဒါမှမဟုတ် လူတွေက သူတို့ကို ထိဖို့နဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်အောင် လင်းပိုင်တွေကို သော့ခတ်ထားသင့်သလား။
လှုပ်ရှားမှုက မင်းကို စိတ်ဝင်တစားရှိတယ်ဆိုရင် ငါ့ရဲ့ အကြံပေးချက်က အဲဒါပါပဲ။ တောထဲရှိ လင်းပိုင်များကြားတွင် ရေငုပ်ရန် သို့မဟုတ် ကူးခတ်ကြည့်ပါ။. အလကားတိရစ္ဆာန်များနှင့် ပြုလုပ်ခြင်းသည် အမဲလိုက်ခြင်းကို အားပေးရုံမျှသာဖြစ်သောကြောင့် အနီးနားရှိတိရစ္ဆာန်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့် အလွန်ကွာခြားပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » စပိန်မှာ လင်းပိုင်တွေနဲ့ ရေကူးလို့ရမယ့်နေရာ
Jaén မှာ ဘာကြည့်ရမလဲ